Ionomy စျေး - အွန်လိုင်း ION ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Ionomy (ION)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Ionomy (ION) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Ionomy ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $428 376.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Ionomy တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Ionomy များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
IonomyION သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0325IonomyION သို့ ယူရိုEUR€0.0276IonomyION သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0249IonomyION သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0297IonomyION သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.296IonomyION သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.205IonomyION သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.722IonomyION သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.121IonomyION သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0434IonomyION သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0454IonomyION သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.74IonomyION သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.252IonomyION သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.173IonomyION သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.44IonomyION သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.5.42IonomyION သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0447IonomyION သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0492IonomyION သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.01IonomyION သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.227IonomyION သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.44IonomyION သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩38.82IonomyION သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦12.33IonomyION သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.39IonomyION သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.903
IonomyION သို့ BitcoinBTC0.000003 IonomyION သို့ EthereumETH0.00008 IonomyION သို့ LitecoinLTC0.000564 IonomyION သို့ DigitalCashDASH0.000376 IonomyION သို့ MoneroXMR0.000376 IonomyION သို့ NxtNXT2.68 IonomyION သို့ Ethereum ClassicETC0.00458 IonomyION သို့ DogecoinDOGE9.67 IonomyION သို့ ZCashZEC0.000393 IonomyION သို့ BitsharesBTS1.25 IonomyION သို့ DigiByteDGB1.25 IonomyION သို့ RippleXRP0.108 IonomyION သို့ BitcoinDarkBTCD0.00115 IonomyION သို့ PeerCoinPPC0.117 IonomyION သို့ CraigsCoinCRAIG15.26 IonomyION သို့ BitstakeXBS1.43 IonomyION သို့ PayCoinXPY0.585 IonomyION သို့ ProsperCoinPRC4.2 IonomyION သို့ YbCoinYBC0.00002 IonomyION သို့ DarkKushDANK10.74 IonomyION သို့ GiveCoinGIVE72.5 IonomyION သို့ KoboCoinKOBO7.63 IonomyION သို့ DarkTokenDT0.0299 IonomyION သို့ CETUS CoinCETI96.67
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 04 Aug 2020 17:40:02 +0000.